मान्छेको छाउरो/ जगदीश घिमिरे | Online Sahitya
(अब छाउरो धेरैचोटि क्वाइँ क्वाइँ नगरेर थोरैचोटि तर धेरै लामू समयसम्म र जोडसँग क्वाँ... ईं... क्वाँ... ईं... गर्न लागेको थियो।)
घरबाट भाग्दा ऊ माग्ने हात र खाने मुख मात्रै बोकेर आफ्ना खुट्टामा सवार भएर भागेको थियो, मूलबाटै मूलबाटो। उसलाई थाहा थियो, सुनिरा'को थियो, पढेलेखेका ठिटाहरु नेपाललाई 'काठमाडौं' पनि भन्छन्, खूब बयान गर्छन्। अत: उसले 'तीन सहर नेपाल' जाने मूलबाटो समायो। उसले धुलिखेललाई 'नेपाल' भनिठान्यो, बनेपालाई 'नेपाल' भनिठान्यो, ठिमीलाई 'नेपाल' भनिठान्यो। नयाँसडक आइपुगेपछि चाहिं सक्कली 'नेपाल' आउनै छ भनिठान्यो।
धुलिखेल आइपुग्दा ऊ दुई दिनको भोको थियो र एउटा होटलमा भाँडा माझ्न थाल्यो, अहिले पल्टिरहेको होटेल उसले काम गरेको अठारौं होटेल हो। बीचमा ६ महिनाजति ढाक्रे थियो। दुई महिना माग्ने पेशा अपनायो। वसन्तपुरको पेटीमा सुत्यो। हिप्पी र टुरिस्ट देखेपछि सबै भुराजस्तै ऊ पनि हात फैलाएर पछि लाग्यो -
किस्ने अझ सेलाउँदै जान्छ। सुत्ने बेलामा उसले आफूलाई रनक्कै तताएको थियो। गाँजा-चरेसको धूवाँले, बिहानदेखि सल्किरहेको हीटरको बाटो साटो काम लिइएका चार-पाँचओटा दमचुलीको मकलले, मान्छेको भीडले पनि कोठा केही तातै थियो। सुत्ने बेलामा उसले जम्मै मकलका गोल निथारपिथार पारेर एउटैमा खन्याएर भुङग्रो चम्काएको थियो र हातखुट्टा सबै तताएको थियो। त्यै रन्कोमा ऊ दुई-तीन घण्टासम्म निदायो पनि तर अहिले ब्यूँझेको छ। ... सायद छैन। उसले यो निधो गर्न सकेको छैन, ऊ निदाएको छ वा ब्यूँझेको छ। बिहान सात बजे मालिक ओर्लन्छ। त्यति बेलादेखि राति बाह्र-एक बजे मात्रै कामको जुवा काँधबाट ओर्लन्छ। त्यस बेला मालिकको, साथी बेराहरुको, कुकहरुको आँखा छलेर उङ्नसम्म पाइन्छ। अनि, कहिल्यै अघाउन्जेल सुत्न नपाएको निद्रा, थकाइ र आलस्यको बोझले गर्दा जति जाडो भए पनि, जति चिसो भए पनि ऊ राम्रै ब्यूँझेको छैन। तर ऊ छाउरो रोएको तीतो स्वर अवस्य सुनिरहेछ र बिथोलिरहेछ। ढोका खोलेर त्यसलाई हुलूँ कि नहुलूँ? दोधारमा छ।
पलले उसलाई बालगिरीको होन्डामा बारबीसे डुलाउन पनि लगेको थियो। पल नाङ्गै सुत्थ्यो। मागेर हिँड्नेताका गाँजा खान, चरेस खान उसले पनि पलसँगै सिकेको हो। पल भन्थ्यो, "म तँलाई माया गर्छु।"
किस्नेलाई पनि पलको माया लाग्छ। तर यो हिउँदमा, यो चिसोमा ऊ पलको अँगालोमा सुत्न पाएन। पल आएन, न जूली नै आई। जूली त नेपालमा थिई, साथीहरुसँग ट्रेकिङमा गएकी तर फर्किन। साथीहरू पीटर, क्रिस्टी, ओभ, मेडलिन सबै फर्किसके। ऊबारे सोध्दाखेरि 'हू नोज?' भन्छन् जसको ठीक अर्थ किस्नेले बुझ्न सकेको छैन।
ऊ त्यै चुरोटसँग जोडेर चरेस भरेको अर्को चुरोट सल्काउँछ। चरेसको मातले उसको टाउको घुमाउन थाल्छ। उसलाई लाग्छ ऊ आफ्नू ओछ्यानबाट केही उचालिंदैछ। बाहिर छाउरो कराउँदैछ। जूलीले भनेकी थिई, चरेसले सोझै स्वर्गमा पुर्याउँछ। धरतीरूपी नर्कमा बस्नु पर्दैन, यो उसले अरूसँग अर्थ लाइमागेर जानेको। उसले जान्ने अङ्ग्रेजी त 'यस' र 'नो' अनि अलि-‍अलि टाकनटुकन मात्रै हो। सोच्यो ऊ स्वर्गतिर जाँदैछ, छाउरो रुँदैछ। उसले आफ्नै आमा सम्झ्यो, जूली पनि उसलाई कता-कता आमाजस्तै लाग्थी। उसलाई मायाले टाँस्थी पनि। एक जोर दोचा किनिदिएकी थिई।
चरेसको सुरमा ऊ झड्केलो बाबुको जुँघा सम्झिन्छ। पलमा उसले आफ्नू झड्केलो बाबु देख्न सकेन... अब साँच्चै ऊ केही सम्झन सक्तैन... साँच्चै स्वर्ग जाँदैछ क्यार... ऊ चरेसको धूवाँ निल्दै जान्छ... ऊ त्यो कुकुरको छाउरोको तीतो आवाज सुन्न छाड्छ (यद्यपि त्यो छाउरो अझ बेसरी रुँदै हुन्छ)... ऊ आफ्नू शीताङ्गलाई बिर्सन्छ... भोलि बिहान सात बजेदेखि मेलोमा जोतिनुपर्ने बन्धनलाई बिर्सन्छ ... सात बजे पाइने दुइटा पाउरोटी र एक कप चियाको ब्रेकफास्टलाई बिर्सन्छ... महिना मरेपछि नगद पाउने रु. दशलाई बिर्सन्छ... !
[ 'अभिव्यक्ति'मा प्रकाशित]